DIIWAANKA Savoia Marchetti S.73 FSX & P3D - Rikoooo
Noocyada, qoob-ka-dhiska sanqadha iyo dhawaaqyada by pcmeneg, rinjiyeynta by Manuele Villa, Vladimir Steffan iyo pcmeneg, dynamics duulimaadka, faahfaahinta iyo qoraallada FSAviator
Tani add-on waa tayo aad u wanaagsan, shaki la'aan waa midka ugu fiican ee bilaashka ah ee qalabka duulista duulimaadka. Naqshadaynta 3D ee bannaanka iyo gudihiisaba waa tayo sare, cabbirradu waa dhab oo 3D, muuqaallada ayaa qeexan sare dhawaqyaduna waa dhab. Waxaa ku jira sideed nool iyo shan nooc. Si taxaddar leh u aqri dukumiintiga. Dad badan ayaa mahad leh qoraaga "pcmeneg" ogolaanshaha rukhsad si loogu soo galiyo Rikoooo.
Savoia-Marchetti S.73 wuxuu ahaa diyaarad talyaani ah oo saddex-tareen ah oo u duulay 1930s iyo horaantii 1940s. Diyaaraddu waxay adeegsatay adeega March 1935 iyada oo la adeegsanayo diyaaradaha 48. Afar waxaa loo dhoofiyay Belgium si loogu helo SABENA, halka todoba kalena ay soo saareen SABCA. Macaamiisha ugu weyn waxay ahayd Ala Littoria airline Talyaani. (Wabiga Wikipedia)
Qoraaga: Noocyada, qalabka farsamada gacanta iyo dhawaaqyada by pcmeneg, rinjiyeynta by Manuele Villa, Vladimir Steffan iyo pcmeneg, dynamics duulimaadka, info iyo farsamooyinka gacanta FSAviator
Iskujir 580 FSX